Cristiano Ronaldo oo sanadkan sameynaya rikoor ku cusub kubadda cagta! – Gool FM
(Turin) 03 Abril 2019. Juventus ayaa ku dhawaaqday inay ciyaartoyda kooxda ay dhimeen mushaaraadkooda si ay uga soo kabsato dhaqaalaha kaga lumay saameynta coronavirus awgeed, balse sidaas oo ay tahay ma saameynayso xiddigeeda Cristiano Ronaldo.
Laacibka reer Portugal ayaa noqonaya sanadkaan xiddiggii ugu horreeyay ee kubadda cagta ciyaara, kaasoo xirfaddiisa ciyaareed shaqeysta 1 bilyan oo dollar, marka guud ahaan ciyaaraha kala duwan la xisaabiyana waxa uu ka soo galayaa booska saddexaad.
Waxaa kaga horreeyay Tiger Woods oo ciyaara golf-ka iyo Feeryahanka Floyd Mayweather Jr, kuwaasoo horay u gaaray inay shaqeystaan 1 bilyan oo dollar.
Xiddiggii hore ee Real Madrid ayaa sanadkii tagay ee 2019 helay 100 milyan oo euro, waxaana la rajeynayaa inuu sanadkan uu noqdo mid gaara darajada bilyanneer (billionaire) xitaa haddii ay laga jaro saddexda bilood ee uu jaray mushaarkiisa Juventus, waxa uu xilli ciyaareedkan gaari doonaa 1 bilyan oo dollar.
Kaliya Kabtanka Barcelona ee Lionel Messi ayaa ka dhaqaalo badnaa xilli ciyaareedkii tagay lacagaha ay soo xareeyeen marka la xisaabiyo, balse 35-sano jirkaan ayaa xirfadda kubadda cagta ku xamaalanaya ku dhowaad 18 xilli ciyaareed oo heerka sare ah, waxaana taasi ay ka caawisay inuu noqdo ciyaaryahankii ugu horreeyay ee kubadda cagta ciyaara, kaasoo 1 bilyan oo dollar shaqeystay.
Website-ka arrimaha dhaqaalaha ka shaqeeya ee Business Insider oo sheekadan daabacay ayaa sidoo kale baahiyay in Roger Federer uu noqon doono sanadkan ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Tennis-ka ciyaara, kaasoo gaara darajada bilyaneer.
Kaliya horyaallada Tiger Woods iyo loyd Mayweather Jr ayaa gaaray inay xirfaddooda ka shaqeystaan hal bilyan oo dollar, marka laga hadlayo xiddigaha weli xifaddooda ku jira, halka Michael Jordan oo ah halyey ciyaari jiray kubadda koleyga uu yahay shaqsiga saddexaad ee guud ahaan taariikhda xirfaddiisa ka maala lacag gaareysa hal bilyan oo dollar, sanaddan gudaheeda ayaana la sugayaa Ronaldo iyo Federer inay iyaguna magacooda ku qoraan diiwaanka bilyaneerrada ciyaaraha.